July 2018 - Ceelhuur Online
July 31, 2018 admin320
Munasabad si weyn loosoo agaasimaya ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka Garacad ee degmadda Jariiban Gobolka Mudug,waxaana lagu dhagax dhigay dhismaha cusub ee dekadda Cusub ee Garacad. Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kahadlay goobta waxaana uu sheegay in dhismaha dekadaani qayb kayahay mashaariicda horumarineed ee bulshada Puntland ku dhisanayaan isku tashi & wax wada […]
July 31, 2018 admin183
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa goor dhow gaaray Magaalada Qardho ee Gobolka bari. Waxaa Ra’iisul wasaare Kheyre ku wehliya safarkiisa, qaar ka mid ah Madaxda Golayaasha Dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka mid ah masuuliyiinta ugu sarreysa Puntland. Wafdiga Ra’iisul wasaaraha oo ka ambabaxay Magaalada […]
AAMIN AMBULANCE WAA NA CAAWINTEE AAN MARKEEDA CAAWINO
July 31, 2018 admin197
Markii ay Daashadeen Bulshada Dagaalo sokeeyey Xaaladu noqotey mid Cakiran islamrkaana la waayey adeegyadii Bulshada, dadkuna wixii tabartooda ah ay ku maareynayaan Noloshooda gaar ahaan sidii loola Tacaali lahaa Dadka Dhaawaca ah iyadoo ay Bulshada Xiligaas ay isticmaalayeen Gaari gacano si loo gaarsiiyo Dadka Goobaha caafimaadka ayaa Dad Soomaaliyeed oo ka damqadey Dhibaatadaas Baaxada leh ayey Muruqooda iyo Maskaxdooda inta isku […]
Ismaaciil Cumar Geelle oo Dhawaan booqanaya dalka Eritrea
July 31, 2018 admin268
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa inuu dhawaan booqasho ku tago Magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Jabuuti iyo Eritrea ayaa waxaa dhexmaray dagaal ku salaysan muran xuduudeed, waxaa Eritrea u muuqataa mid kasoo baxaysa go’doonkii siyaasadeed ee ay ku jirtay muddo badan. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisulwasaaraha itoobiya ayaa booqasho ku tagay dalkaan. […]
July 31, 2018 admin176
Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ku sii jeeda degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. Ciidamo isugu jira Milateri, Boolis iyo Nabadsugid oo aad u hubeysan ayaa xalay saqdii dhexe gaaray Afgooye, si ay ugu gogol xaaraan Madaxweynaha. Xaafado ka tirsan Afgooye ayaa waxaa ka socdo howl gallo […]
July 31, 2018 admin258
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka baaqday safar uu ku tagi lahaa degmada Garacad, halkaasoo ka mid aheyd goobaha la qorsheeyay inuu booqdo, inta uu ku guda jiro safarkiisa deegaanada Puntland. Wararka laga helayo Garowe ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha uu ka baaqsaday safarkaas culeysyo siyaasadeed darteed, waxaana qorshaha Garacad qeyb ka aheyd […]
July 30, 2018 admin305
Shirka xasilinta wadajir looga hadlayo ayaa maanta ka furmay xarunta Xalane magaalada Muqdisho, shirkaan ayaa waxaa hagaya Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya Cali Joqombe, waxaana ka qeybgalay masuuliyiin ka socota wasaaradaha arimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamka. Barnaamijka Wadajir Framework ayaa loogu talagalay dhismaha Golayaasha degmooyinka Dalka, iyo dib […]
July 30, 2018 admin188
War-murtiyeedka heshiiska Dowladaha Ereteriya iyo Soomaaliya —————————————– Iyada oo maanka lagu hayo xiriirka iyo saaxiibtinimada qotoda dheer ee labada shacab ee Ereteriya iyo Soomaaliya Iyada oo dib loo millicsanayo xaqiiqada ah in shucuubta Soomaaliya iyo Ereteriya ay si joogta ah isu garab istaageen, isuguna taageereen halgankii mid kasta ugu jirey xornimada, madaxbannaanida iyo horumarka; Iyada […]
July 30, 2018 July 30, 2018 admin182
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo Masuuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa Madaxweynaha ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Madaxweyne Xaaf ayaa muddo laba todobaad ah ku maqnaa dibadda, isagoo ka qeybgalay shirkii arimaha Soomaaliye ee Brussels lagu qabtay. sidoo […]
July 30, 2018 admin193
Admiral Maxamed Cumar Cismaan Guddoomiyaha ururka ONLF ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Ururka raali gelin ka siiyay xarigii C/kariin (Qalbi-dhagax), kadib markii ay ku kulmeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Wareysi uu siiyay Admiral Maxamed Cumar Cismaan Idaacada Codka Maraykanka ee VOA laanta afka Soomaaliga ayaa sheegay in kulan ay yeesheen […]